२० हजार पोर्न साइट बन्द, अझै ४ लाखको हाराहारीमा अश्लील वेबसाइट छनः दूरसञ्चार प्राधिकरण
Posted: 2018-10-02 04:43:10
काठमाडौं– नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म बीस हजार पोर्न साइट बन्द गरेको जनाएको छ।प्राधिकरणका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सोमवारसम्म बीस हजार पोर्न साइट बन्द गरिएको छ।
खनालका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी), नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) र भ्वाइस सेवा प्रदायक (भीओआइपी) लाई निर्देशन जारी गरेर अश्लिल वेबसाइट बन्द गराइएको छ।
खनालले नेपालबाट ३ देखि ४ लाखसम्म त्यस्ता साइटमा पहुँच हुने गरेको अनुमान रहेको जानकारी दिए। तर जानकारहरुका अनुसार पोर्न साइटको स‌ंख्या त्यो भन्दा कयौ‌ं गुणा ज्यादा छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अश्लिल साइटको विवरण संकलन गर्दै क्रमशः बन्द गर्न आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणले अहिले कन्टेन्ट फिल्टर सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिए। अश्लिल साइट बन्द गराउन नियमित काम बाहेक केही बोझ थपिएको भएपनि खासै समस्या नआएको खनालले जानकारी दिए।
मुलुकमा बलात्कार एवं यौनजन्य हिंसाका घटना बृद्धि भएसँग सरकारले इन्टरनेटका अश्लिल सामग्री नियन्त्रण गर्न पोर्न साइट बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।
“इन्टरनेटको माध्यमवाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित“ गरेको ठहर गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अश्लिल साइट बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि असोज ८ गतेदेखि प्राधिकरणले अश्लिल साइट बन्द गर्न थालेको हो।
‘पूरै रोक्न सम्भव छैन’
सागर लामिछाने, साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट, रिगो टेक्नोलोजी
सरकारले १० वर्षअघि यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लाउने निर्णय गरेकै हो । यो सम्भवै नहुने कुरा त हैन । धेरै देशमा प्रयास भएको पनि छ तर फुत्किरा’को छ । सेन्सरसिपका मामिलामा सबैभन्दा कडा मानिएको चीनमा त पुरै रोकिन सकेको छैन । म आफैँ चीनमा जाँदा पनि त्यस्तो फेला पारेको थिएँ ।
कन्टेन्ट ब्लक दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा एक्टिभ ब्लक र अर्को प्यासिभ ब्लक । प्यासिभ ब्लकभित्र पोर्न साइटको लिस्ट पठाएको आधारमा गरिन्छ। त्यो त साध्य नै छैन। किनभने संसारमा कति अश्लील र पोर्न साइट छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। अर्को एक्टिभ ब्लकको तरिका हो। यो कन्टेन्टमा आधारित र कि–वर्डका आधारमा ब्लक गरिन्छ। जस्तो, सेक्स शब्द नै ब्लक हुने भयो भने लन्डनको प्रख्यात र चल्तीको मिडलसेक्स युनिभर्सिटीको वेबसाइट पनि खोल्न मिल्दैन। यौनसम्बन्धी शिक्षा दिने हिसाबले प्रकाशित गरिएका कन्टेन्ट ब्लक हुन सक्छन्।
एक त इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी)को काम कन्टेन्ट ब्लक गर्ने हैन। उसको काम त इन्टरनेट सर्भिस दिने मात्रै हो । तैपनि सरकारले ल, रोक्न लगायो रे ! तर गाह्रो छ किनभने एक्टिभ ब्लकका लागि चाहिने डिभाइस नेपालमा दुई तीन वटा आइएसपीभन्दा बढीले ल्याउन सक्छन् भन्ने लाग्दैन। करोडौँ रकम पर्छ। झन्डै १० वर्षअघि एउटा आइएसपीले दुई करोड तिरेर त्यो डिभाइस ल्याएको थियो। त्यतिबेलै उक्त आइएसपी यो ब्लक सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
आइएसपीले ब्लक गरे पनि पुअर नेटवर्क, प्राइभेट भिपिएनबाट त्यस्तो कन्टेन्ट खोल्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यसरी ब्लकतिर ध्यान दिनुभन्दा पनि सेक्स एजुकेसनमा पैसा लगानी गर्यो भने बढी फाइदा होला भन्ने लाग्छ।
‘अश्लील भनेपछि अश्लील’
रामचन्द्र ढकाल, प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय
सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लाउने निर्णय त गर्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन नि?
वाग्मती सरसफाई गर्नुपर्यो भनेको भोलिपल्ट वाग्मती सफाइ भइसक्छ र रु एकैदिनमा कहाँ हुन्छ त रु समय त लाग्छ नि १ हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । अलिकति त घटेको छ । युट्युब खोल्नुभयो भने अहिले पहिलेजस्तो नाङ्गा भिडियोहरु आउँदैनन् । गुगलतिर जानुभयो भने पनि खोज्न टाइम लाग्छ ।
अहिलेसम्म कति त्यस्ता साइटहरु हटाइसक्नुभयो, केही डाटा छ ?
छैन । कतिवटा थियो भन्ने डाटा पनि छैन, कति हटे भन्ने पनि थाहा छैन।
कस्ता सामग्रीहरुलाई तपाईंहरु अश्लील मान्नुहुन्छ रु अश्लीलताको मापन कसरी गरिरहनुभएको छ?
अश्लील भनेपछि अश्लील । मापदण्ड बनाएर काम हुन्छ।
अहिलेसम्म मापदण्ड छैन ?
बनाउँदै होलान् । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले बनाइरहेका होलान्।
सरकारले बनाउँदैन ?
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्भव छ त यसरी बन्देज लाउन ?
विस्तारै हुन्छ ।
सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुको खास कारण के हो ?
त्यस्ता सामग्रीहरुले समाजमा अश्लीलता फैलियो । अपराधमा प्रोत्साहन भयो ।
अब अपराध रोकिएला त?
अपराधको एउटा कारण यो पनि हो । पूरै त होइन । अलिअलि प्रभाव त पारिहाल्छ नि ?
अन्तर्वार्ता शुक्रवार साप्ताहिकबाट